६० वर्षको उमेरमा पनि अभिनेता भुवन केसीको अनौठो प्रेम कहानी ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/६० वर्षको उमेरमा पनि अभिनेता भुवन केसीको अनौठो प्रेम कहानी !
उनि नेपाली चलचित्रका सर्वाधिक सफल कलाकार समेत मानिन्छन्। उनले निर्माण र अभिनय गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । फिल्ममा सफल हुदाँहुदै पनि यद्यपि भुवन पारिवारिक रूपमा भने असफल छन् ।** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
राजेश हमाललाई लिएर बलिउड फिल्म बनाउने तयारी !